Thwebula CCleaner 1.16.62 – Android – Vessoft
CCleaner – isicelo esinamandla ukuhlanza nokwandisa uhlelo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ihlole system bese ususe amafayela okungadingekile ukukhulula isikhala kwimemori khadi, ukusula isilondolozi isicelo, umlando isiphequluli, okuqukethwe yokunamathisela njll CCleaner kwenza ukuba ngokushesha futhi ngokuphepha ukususa izinhlelo ezingafuneki. Isofthiwe futhi likuvumela ukuba iqaphe CPU, izinga lokushisa, level battery futhi asebenzise inkumbulo noma tekusebenta zangaphakathi.
Yokuhlanza kanye nokwenza of uhlelo
Amazwana on CCleaner:
CCleaner Ahlobene software:
Ubuso bekhompyutha System nokwenza Isofthiwe elula Amatebhe ukushintsha interface kanye nekuhlomisa idivayisi Android ngokusho esikuthandayo.
English, Français, Español, Deutsch... Clean Master 5.14.6.4123
System nokwenza Imenenja ethandwayo ukuphathwa ifayela futhi system nokwenza. Isofthiwe kwenza ukuba sihlaziye isimo zedivayisi futhi kuhlanzwe uhlelo ngomsebenzi ikhiqize kakhudlwana.
System nokwenza Isofthiwe ngokonga futhi ukuvimbela ngokweqile kwamandla eyenza ukugcina ibhethri ye device sesimweni emsebenzini isikhathi eside.
English, Українська, Français, Español... DU Speed Booster 2.9.8.6
System nokwenza The Ngaphezu omkhulu ukunikeza elula, ephephile futhi fast idivayisi operation. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi amaningi ukuba kuzuzwe ukusebenza enkulu ngangokunokwenzeka.
System nokwenza Isofthiwe ukuze bathole Root-amalungelo for amadivaysi kakhulu kusukela abakhiqizi ezahlukene. Futhi isofthiwe kwenza ukusebenzisa script ekhethekile esiklanyelwe kubasebenzisi eziphambili.
English, Українська, Français, Español... ES File Explorer 4.0.4.7
System nokwenza Imenenja yefayela enamandla ukuphatha amafayela akho kanye nezicelo. Isofthiwe ine amathuluzi amaningi nokwandisa ukusebenza.
English, Français, Español, Deutsch... MediaGet 1.4.39
Downloaders Ithuluzi thwebula amafayela kusukela internet. Isofthiwe ikuvumela ukuba afeze search ifayela elula eziningi ezithandwayo kumasayithi sesifufula.
Abanye Isofthiwe oda fast and kalula ngasese umshayeli nge imoto executive ngamanani aphansi futhi nemali lekhokhwako esamukelekayo uhambo.
Ukubethelwa Isofthiwe ukukhiya izicelo, indawo eyisitezi eholweni, internet connection, izilungiselelo imenyu, contact izinhlu noma amanye amafayela nge password.
English, Français, Español, Deutsch... Dropbox 22.2.2
English, Afrikaans, Українська, Français... CPU-Z 1.19
Testing Isicelo ukubonisa ulwazi mayelana nesimo se-kudivayisi. Umsebenzisi ithuba ukubuka idatha inkumbulo, iprosesa, izinga lokushisa kanye nezinye izingxenye system.